Ndifuna ukwazi ukuba ungabaTaka njani abahlobo bam kwi-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 11, 2021 0 IiCententarios 390
Amaxesha amaninzi sithumela iifoto kunye nevidiyo kwi-Instagram apho sikunye nabanye abantu kwaye singathanda ukuwaphawula ukuba nawo anazo ezi nkumbulo. Mhlawumbi sifuna ukuxelela inani elithile labantu malunga nezinye iindlela ezintsha esizibonayo kwiprofayili yethu, ukukhuthaza iimveliso zethu okanye iinkonzo.
Ukulebhelisha kubanika enye indlela banokwabelana ngezithuba okanye iibhayografi esizikhankanyileyo. Kule meko, kukho, njengoko sikuxelele, zimbini iindlela zokubeka iilebheli, emva koko siza kukuxelela indlela yokwenza:
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukungena kwiakhawunti yakho ye-Instagram, kunye negama lakho lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Xa ukhetha ifoto okanye ividiyo ofuna ukuyilayisha, ngendlela eqhelekileyo ulandela imiyalelo yenkqubo. Oku kuya kukunika iindlela ezizezinye:
Inkcazo emfutshane yefoto, oko kukuthi, unokukhetha ukuxelela abantu ukuba kwenzeka ntoni ngelo xesha.
Ubuphi okanye babekhona abantu abasesifotweni.
Kwaye okokugqibela uyabonisa ukuba ngubani ofuna ukumakwa sisicelo.
Kuya kufuneka ukhethe enye indlela, kwaye xa ucofa kuyo, iya kukubonisa ifoto.
Ukuba liqela labantu kwaye ufuna ukubakhankanya, kuyakufuneka ukhombe ubuso balo mntu, emva koku ubhale iadresi okanye Igama lomsebenzisi kwi-app.
Ngokukhawuleza xa inkqubo ikunika ezinye iindlela zeakhawunti, khetha enye eyeyomntu kwaye ucofe kuyo. Kwaye ngoku, le nkqubo iya kubonisa ukuba ikhankanyiwe okanye uphawulwe ngeposi.
Xa upapasho sele lwenziwe eludongeni lwakho:
Kule meko kuya kufuneka uyihlele, ngale ndlela inkqubo iya kukunika enye indlela yokukhetha iilebheli ezingaphezulu.
Into yokuqala ngokucacileyo kukukhangela kunye khetha ifoto.
Kupapasho amachaphaza amathathu avela kwinxalenye ephezulu yasekunene (· Saka) kuya kufuneka cinezela kubo.
Oku kukunika ukhetho lokuhlela ifoto, kunye nenkcazo yayo, ngendlela efanayo eya kwenzeka ngokhetho lokongeza indawo kwaye kunjalo yongeza ezinye iithegi.
Khetha olu khetho lokugqibela.
Ukuba liqela lomntu kwaye ufuna ukubakhankanya, kuya kufuneka ubonakalise ubuso balo mntu, emva koku ubhala idilesi okanye igama lomsebenzisi kwisicelo.
Okwangoku inkqubo Ndikunika ezinye iindlela Khetha iakhawunti eyeyomntu kwaye ucofe kuyo. Kwaye ngoku, inkqubo iya kubonisa ukuba ikhankanyiwe okanye ithegiwe kupapasho.
Ngokumalunga namabali ezinye iindlela zikhona, unokufaka ukubhala okuthile, phakathi kwabanye kwaye ngokuqinisekileyo kukho loo nto ithegi.
Apha ungayenza ngeendlela ezimbini:
Ungabhala kwifom yokubhaliweyo usebenzisa i @ kunye negama lomntu kwaye ukhethe iakhawunti yakho yomsebenzisi.
Ukuthiya umntu lowo igama, kule meko sebenzisa enye indlela yokukhankanya kwaye ubhale igama lomntu ofuna ukumakisha. Le yibhokisi oyifumana ekunene ngasentla. Ucofa kuyo kwaye kunjalo.
1 Ngaphambi kokupapasha:
2 Xa upapasho sele lwenziwe eludongeni lwakho:
4 Apha ungayenza ngeendlela ezimbini:
Ndingabafikelela njani abantu abaninzi kwiPinterest?